18 Saa bere no na ɔhene biara nni Israel.+ Na saa nna no mu no na Dan abusuakuw+ no rehwehwɛ asase atena so, efisɛ ɛde besi saa bere no na wonnyaa agyapade wɔ Israel mmusua no mu.+ 2 Enti Danfo no somaa wɔn abusua no mu mmarima baanum a wɔyɛ akokodurufo fii Sora+ ne Estaol+ sɛ wonkokyinkyin nhwɛ+ sɛnea asase no te. Na wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔfa asase no so nhwɛ sɛnea ɛte.” Akyiri yi wokoduu Mika+ fie wɔ Efraim+ bepɔw so, na wɔdaa hɔ ma ade kyee. 3 Bere a wɔbɛn Mika fie no, wɔtee Lewini aberante no nne, enti wɔman hɔ. Na wobisaa no sɛ: “Hena na ɔde wo baa ha, woreyɛ dɛn wɔ ha, na dɛn koraa na wowɔ wɔ ha?” 4 Obuaa wɔn sɛ: “Sɛɛ ne sɛɛ na Mika yɛ maa me, na wabɔ me paa+ sɛ menyɛ ne sɔfo.”+ 5 Afei wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛsrɛ wo bisa+ Onyankopɔn+ ma yɛn na yenhu sɛ ɔkwan a yɛrekɔ no besi yɛn yiye anaa.” 6 Na ɔsɔfo no ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Momfa asomdwoe nkɔ, efisɛ ɔkwan a morekɔ no da Yehowa anim.” 7 Ɛnna mmarima baanum no sii mu koduu Lais,+ na wohui sɛ nnipa no te wɔn ho so sɛnea Sidonfo su te. Ná wɔte hɔ komm a hwee nhaw wɔn,+ na otirimɔdenfo biara nni hɔ a ɔhyɛ wɔn so wɔ asase no so. Bio nso wɔne Sidonfo+ ntam ware, na wɔne nnipa biara nni hwee yɛ. 8 Akyiri yi wɔsan baa wɔn nuanom nkyɛn wɔ Sora+ ne Estaol,+ na wɔn nuanom no bisaa wɔn sɛ: “Ɛkɔɔ dɛn?” 9 Ɛnna wɔkae sɛ: “Monsɔre na yɛnkɔ wɔn so, efisɛ yɛakohu sɛ asase no ye.+ Mote hɔ reyɛ dɛn? Monkeka mo ho na monkɔfa asase no.+ 10 Sɛ mokɔ a, mubehu sɛ nnipa no te hɔ a hwee nhaw wɔn+ na asase no sõ. Onyankopɔn de ahyɛ mo nsa,+ na biribiara nni asase so a ɛho yɛ nã wɔ hɔ.”+ 11 Afei Dan abusuakuw+ no mu mmarima ahansia a wɔde akode ahyehyɛ wɔn ho siim fii Sora ne Estaol+ kɔe. 12 Na wɔkɔsoɛɛ Kiriat-Yearim+ wɔ Yuda. Enti wɔtoo hɔ din Mahane-Dan+ na wɔfrɛ hɔ saa de besi nnɛ. Ɛwɔ Kiriat-Yearim atɔe fam. 13 Wofi hɔ twaam kɔɔ Efraim bepɔw so koduu Mika+ fie. 14 Ɛnna mmarima baanum a wɔkɔhwɛɛ+ Lais+ asase no ka kyerɛɛ wɔn nuanom no sɛ: “Munim sɛ asɔfotade ne terafim honi+ ne ohoni a wɔasen+ ne nea wɔagu+ wɔ fie yi mu? Afei monhwɛ nea mobɛyɛ.”+ 15 Enti wɔman kɔɔ Lewini+ aberante no fie wɔ Mika fie, na wobisaa no sɛnea n’apɔw mu te.+ 16 Saa bere yi nyinaa na Danfo+ mmarima ahansia a wɔde akode+ ahyehyɛ wɔn ho no gyinagyina pon no ano. 17 Afei mmarima baanum a wɔkɔhwɛɛ asase no+ wuraa fie hɔ sɛ wɔrekɔfa ohoni a wɔasen+ ne asɔfotade+ ne terafim honi+ ne ohoni a wɔagu+ no. (Saa bere no na ɔsɔfo+ no ne mmarima ahansia a wɔde akode ahyehyɛ wɔn ho no gyina pon no ano.) 18 Na wɔkɔɔ Mika fie kɔfaa honi a wɔasen ne asɔfotade ne terafim honi ne ohoni a wɔagu+ no. Ɛnna ɔsɔfo+ no bisaa wɔn sɛ: “Dɛn na moreyɛ yi?” 19 Na wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛ komm. Fa wo nsa to w’ano, na wo ne yɛn nkɔ na yɛmfa wo nyɛ yɛn papa+ ne yɛn sɔfo.+ Sɛ́ wobɛyɛ ɔsɔfo wɔ onipa biako+ fie ne sɛ wobɛyɛ ɔsɔfo ama Israel abusuakuw+ ne abusua bi, nea ɛwɔ he na eye?” 20 Ɔsɔfo no penee so+ na ɔfaa asɔfotade ne terafim honi ne ohoni a wɔasen no,+ na ɔkɔkaa nnipa no ho. 21 Afei wɔdan wɔn ho kɔe, na wɔmaa mmofra nketewa ne wɔn mmoa ne wɔn agyapade dii anim.+ 22 Bere a wofi Mika fie kɔɔ akyiri kakra no, Mika+ afipamfo behyiae, na wotiw Danfo no. 23 Na wɔteɛɛm frɛɛ Danfo no, ɛnna wɔdan wɔn ani bisaa Mika sɛ: “Dɛn na ɛyɛ wo+ a wukura dɔm kɛse yi?” 24 Ɛnna ɔkae sɛ: “Anyame+ a mayɛ+ no moafa de ɔsɔfo+ no aka ho kɔ, na dɛn bio na mewɔ?+ Adɛn na mutwa mo ho bisa me sɛ, ‘Dɛn na ɛyɛ wo?’” 25 Na Danfo no ka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛmpɛ sɛ yɛbɛte wo nne wɔ yɛn mu, anyɛ saa a, mmarima a wɔn bo afuw+ yi bɛtow ahyɛ mo so, na wo ne wo fiefo nyinaa bɛhwere mo kra.” 26 Danfo no toaa wɔn akwantu so, na Mika hui sɛ wɔn ho yɛ den sen no,+ enti ɔsan n’akyi kɔɔ ne fie. 27 Wɔfaa nea Mika ayɛ no ne ne sɔfo+ no de wɔn ani kyerɛɛ Lais,+ na wɔkɔtow hyɛɛ nnipa a wɔte hɔ komm a hwee nhaw wɔn+ no so. Wɔde nkrante+ kunkum wɔn de ogya hyew kurow no.+ 28 Obiara nni hɔ a na obegye wɔn, efisɛ na kurow no ne Sidon+ ntam ware, na wɔne nnipa biara nni hwee yɛ; ná kurow no da Bet-Rehob+ asasetaw so. Afei wɔsan kyekyee kurow no tenaa mu.+ 29 Na wɔde wɔn papa Dan+ a ɔyɛ Israel ba+ no din too kurow no, enti wɔfrɛɛ hɔ Dan. Nanso kan no na wɔfrɛ kurow no Lais.+ 30 Ɛno akyi no Danfo no de ohoni a wɔasen+ no sii hɔ fae. Na Mose ba Gersom+ ba Yonatan+ ne ne mma bɛyɛɛ Dan abusuakuw no asɔfo kosii da a wɔfaa ɔman no kɔɔ nkoasom mu.+ 31 Enti wɔfaa Mika honi a wɔasen no bere a nokware Nyankopɔn fie+ wɔ Silo+ nyinaa.